Ciyaaraha Harry Potter ee ugu wanaagsan Android | Androidsis
DaniPlay | 19/07/2021 01:14 | La cusbooneysiiyay 20/07/2021 01:15 | Ciyaaraha Android
Waxay u badan tahay inuu yahay mid ka mid ah sagaska ugu guusha badan taariikhda shineemooyinka, ka hor dadka kale sidoo kale loo yaqaan Star Wars, Jurassic Park ama James Bond. Harry Potter waqti ka dib wuxuu gartay sida loo daahiriyo naftiisa, dhamaantiis wuxuu ugu mahadcelinayaa sheekada ka dambeysa mid kasta oo ka mid ah buugaagtiisa oo markii dambe la qabsaday filimada.
Qeyb aysan ka niyad jabin waa ciyaaraha fiidiyowga, halkaasoo ay sidoo kale ka dhigtay niche sidoo kale aaladaha moobaylka. Waan ku tuseynaa ciyaaraha Harry Potter ee ugu wanaagsan Android, noocyo badan oo iyaga ka mid ah oo qaarkoodna ay leeyihiin kharash dheeraad ah oo ay ku doonayaan inay ku ciyaaraan.
2 Kediska Harry Potter
3 LEGO Harry Potter: Sanadaha 1-4
4 LEGO Harry Potter: Sanadaha 5-7
5 Harry Potter: Sirta Hogwarts
6 Harry Potter Wizard Kediska: U8Q
7 Harry Potter: Xujooyinka iyo Sixirka
8 Harry Wizard Potter sixir Beat Holes Tiles
9 Halxiraalaha Hogwarts HP
10 Ciyaarta Halxiraalaha Jigsaw Puzzle Game
Horumariyaha Niantic ayaa bilaabay cinwaan ka duwan taxanaha Harry Potter oo cinwaankiisu yahay Harry Potter: Wizards Unite. Iyada oo ku saleysan cinwaanka Pokémon Go, adduunku wuxuu ku faafaa farsamoyaqaanno gebi ahaanba la qabatimay, taas oo ay tahay inaad u adeegsato xaqiiqda la kordhiyay si aad horay ugu socoto.
Harry Potter: Wizards Unite waa inaad ka xoreysaa noolaha hexes, tan awgeed waa inaad u adeegsataa sixirka dabeecada. Mid ka mid ah maaddooyinka waaweyn waa ururinta walxaha, dhammaantood waxay muhiim u yihiin horumarka ciyaarta xiisaha leh ee dhammaan noocyada dadweynaha.
Cinwaanku wuxuu ka kooban yahay dhacdooyin gaar ah, kaas oo aad kula ciyaari karto asxaabtaada koox ahaan, ugu badnaanna ilaa afar ciyaartoy. Ma ahan tan ugu qiimaha badan, in kasta oo ay taasi jirto ayaa mudan in la isku dayo oo la ciyaaro mid ka mid ah cinwaannada ka duwan inta ka hartay sagaalka Android.
Kediska Harry Potter
In kasta oo uusan ahayn ciyaar fiidiyow ah, Su'aalaha Kediska ee Harry Potter Spells waxaad u baahan doontaa inaad muujiso wax kasta oo aad ka ogtahay taxanaha caanka ah buugaagta. Waa ciyaar su'aal iyo jawaab ah, taas oo aan ku qasbanaan doonno inaan qiyaasno haddii aan dooneyno inaan ku dhex marno wareegyada kala duwan.
Waxay ku saleysan tahay weedho iyo tibaaxyo ka soo baxay sheekada caanka ah, Waxay leedahay dhowr heerar iyo nidaam su'aal oo ka dhigaysa mid ka mid ah kuwa aan laga maqnaan karin liiska. Jawaabaha way kala duwanaan karaan, ama afar jawaabood oo macquul ah ama ku dar xarfaha maqan.
Aflagaadadu way soo muuqataa, laakiin sidoo kale waxyaabo kale oo badan oo ka mid ah taxanaha caanka ah ee la yaqaan, sidaa darteed haddii aadan arkin, waxaa fiican inaad mid walba aragto kahor. Ma aha codsi rasmi ah, laakiin waxay u dhacdaa inay tahay ikhtiyaar xiiso leh haddii aad rabto inaad waqti la qaadatid qoyskaaga iyo saaxiibbadaada.
Developer: Dunida Kediska
LEGO Harry Potter: Sanadaha 1-4
Cinwaankani wuxuu ku saleysan yahay buugaagta Harry Potter iyo filimada 1 illaa 4, taas oo uu ku ciyaari doono doorka jilayaasha sida Harry, Ron, Hermione, iyo kuwo kale. Waxaad u baahan doontaa inaad sahamiso Hogwarts in ka badan 40 heerar kala duwan, dhammaantoodna leh sawiro dhaadheer oo aad ufiican inaad ka shaqeyso taleefannada aan aadka u awood badneyn
Ciyaartani waxay ku saleysan tahay cinwaano kale oo LEGO ah, oo xiiso leh in saacado badan lagu qaato shaashadda yar, in kasta oo sidoo kale lagu ciyaari karo aaladda sida kiniiniyada ama kombiyuutarrada emulators-ka. Waxa ugu fiican ayaa ah inaad awood u leedahay inaad sahamiso khariidadaha kasta si aad u ogaato waxyaalaha qarsoon oo ku sii kor iyaga.
Waxaa ka mid ah Tartanka Triwizard, Quidditch Koobka Adduunka, dagaalka ka dhanka ah basilisk ee qolka sirta, la kulanka Aragog iyo iska hor imaadka fool ka foolka ah ee Voldemort. Kontaroolada shaashadda taabashada waa fududahay oo dareen leh, usha bidix ee aad ku leedahay qalliinka, kuwa midigta ku jirana waa kuwa la falgala astaamaha iyo cadawga. In kasta oo qiimeynteeda, LEGO Harry Potter: Sannadaha 1 illaa 4 ayaa mudan in lagu tijaabiyo aaladaha Android.
LEGO Harry Potter: Sanadaha 5-7
Cinwaankan waxaa lagu dejin doonaa sanadihii ugu dambeeyay ee Harry Potter dugsiga Hogwarts, oo leh dhibaato aad u weyn sida loogu talagalay carruurta 5 ilaa 7 sano jir ah. Khibradda ciyaarta ayaa ka fiicnaan doonta gudbinta 1 illaa 4, iyadoo leh qeyb garaaf badan iyo sheeko hagaagsan.
Xakamaynta LEGO Harry Potter: Sanadaha 5-7 way fududahay in laga sameeyo shaashadda taabashada, ha ahaato hadaf bartilmaameedyada, sixirka, ama jilayaasha beddela. Dib u soo noolee hal-ku-dhegyo caan ah adoo tuuraya isla markaana ka cararaya faro farta, mid ka mid ah waxyaalaha badan ee la heli karo.
LEGO Harry Potter: Sannadaha 5-7 Ku dar Bookmarks, Ku dhammee 100% ciyaarta waqti ka yar dhibcaha ayaa ka soo muuqan doona hoggaanka internetka. Guulihii ciyaaryahankan fiidiyowga caanka ah lagu yaqaan waa wadar ahaan 25, mid walboo ka mid ah wuxuu ka gudbi doonaa mid sahlan oo dhib badan.
Harry Potter: Sirta Hogwarts
Ciyaarta fiidiyowga ayaa xuddun u noqon doonta Hogwarts, makaanikku waa door nadiif ah waana mid si sax ah uga mid ah cinwaannada hareeyay dad badan oo isku dayay. Qofka aan gacanta ku hayno wuxuu baran doonaa khiyaamada sixirka iyo awoodaha, dhammaantoodna waxay ku saleysan yihiin horumar, sidoo kale waxay lagama maarmaan noqon doontaa in la helo kaarar heer ah haddii aan dooneyno inaan si dhakhso leh u horumarinno.
Sheekadu waxay leedahay khiyaano iyo riwaayad weyn, muuqaalaynta ciyaartan waa mid ka mid ah miisaanka xoogga leh, iyadoo ka mid ah kuwa waqtiga sii wadaya inay sii wadaan nooca. Qaabka ciyaarta ayaa waxoogaa caajis ah adiga oo dooranaya cunsur kasta shaashadda.
Harry Potter: Hogwarts Mystery wuxuu quudiyaa micropayments, waxaas oo dhami waa cinwaan bilaash ah oo sagaal ah oo uu abuuray abuuraha Jam City. Miisaanka Hogwarts Mystery waa 165 megabytes, wuxuu u baahan yahay Android 5.0 ama nooc ka sareeya oo wuxuu dhaafayaa 50 milyan oo soo degsasho ah.
Harry Potter Wizard Kediska: U8Q
Waa ciyaar aad u horumarsan oo kedis ah marka loo eego Kediska loogu talagalay Harry Potter Spell, oo aan ku dhisnayn wax badan weedhaha iyo muujinta filimada kala duwan. Waxyaabaha wanaagsan ee ku saabsan Harry Potter Wizard Kediska: UBQ wuxuu awood u leeyahay inuu uga jawaabo su'aalaha si aan kala sooc lahayn, in kasta oo aad sidoo kale dooran karto kuwa filimka su'aasha ku jira.
Sida ciyaar kasta, jawaabaha waxay yeelan doonaan waqti xadidan Bilaabidda cashuurta, waa la kordhin karaa haddii aad rabto xulashooyinka ciyaarta. Dhibcaha ayaa muhiim ah in lagu dhammeeyo sidii horyaalka, markaa uma baahnid inaad wax badan seegto haddii aad rabto inaad garaacdo kuwa kaa soo horjeeda.
Jawaabaha waa la xaqiijiyay, mid walboo ka mid ah wuxuu kuu soo diri doonaa xiriiriyeyaasha bogga si aad wax badan uga baratid iyaga, isagoo aad waxtar u leh haddii aad tahay taageere taxanaha ah. Ku habboon in qoyska waqti fiican lala qaato iyo asxaabta haddii aad jeceshahay Harry Potter iyo adduunkiisa oo dhan.
Harry Potter: Xujooyinka iyo Sixirka
Ciyaaraha halxiraalaha iyo sixirka waligood sifiican looma isku darin ka badan abkan. Harry Potter: Halxiraalaha iyo Sixirka waxaa sameeyay Zynga-ka caanka ah ee leh astaamo badan oo cusub, oo ay ku jiraan 3-a-a-jere iyo sidoo kale qaybo ka mid ah oo lagu soo daray ciyaaraha taxanaha caanka ah ee sheekooyinka.
Horumar kasta oo aad sameyso wuxuu furi doonaa daqiiqado muhiim ah oo ka socda filimada, Harry, Ron iyo Hermione oo la dagaallamaya troll, kaftanka Fred iyo George ama Hagrid oo daryeelaya xayawaannada sixirka ah. Baro wax badan oo ku saabsan Hogwarts, iyo sidoo kale soo uruur xayawaan kaa caawin doona xallinta xujooyinka Si fudud. Codsigan ayaa culeyskiisu yahay 132 megabyte, waxaa soo degsaday in kabadan 10 milyan oo qof qiimeyntiisuna waa 4,7 xiddig.
Harry Wizard Potter sixir Beat Holes Tiles
Waa ciyaar 3D ah oo aad ku furaysid jilayaasha saddex cabbir ah kuna dul boodbo dusha sare. Si tan loo sameeyo, waa inaad doorataa mid ka mid ah biyaano la heli karo oo aad sameysid muusig, waxaa jira dhowr nooc oo noocyo ah oo aad ugu dhaqaaqi karto, ama sidaad jeceshahay ama aad sameysid tallaabooyinkaaga koowaad.
Qoraallada waxaa sidoo kale abuuray khubaro ku takhasustay muusigga, tan awgeed waa inaad ku booddaa mid kasta oo tabta ah si aad u sameysid mid kasta oo ka mid ah heesaha. Harry Wizard Potter Magic Beat Hop Tiles wuxuu culeyskiisu yahay 54 megabytes waxaana soo dejiyey in ka badan 100.000 oo qof.
Halxiraalaha Hogwarts HP
U janjeedha adduunka Harry Potter, xarumahan xujada leh ee caanka ku ah Hogwarts, markaa waxaa la joogaa waqtigii loo kala googooyn lahaa gabal ilaa uu ka dhammaanayo. Waxyaabaha xiisaha leh ayaa awood u leh inay sameeyaan dhowr jeer oo kala duwan markasta, si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa, oo ah qodob tixgelin mudan.
Waxay leedahay xujooyin badan, waxay ku darsataa laba nooc oo heerar dhib ah, mid carruurta iyo mid dadka waayeelka ah oo u dhexeeya 16 iyo wixii ka sarreeya. Waxaad awoodi doontaa inaad isku beddesho, hagaajiso oo aad dhammaystirto qaybaha, xujo kasta waxay ku siin doonaan abaalmarin aad ku soo furto xujooyinka cusub usbuuca oo dhan.
Ciyaarta Halxiraalaha Jigsaw Puzzle Game
Halxiraalaha muhiimka ah haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato adduunka Harry Potter. Si tan loo sameeyo, waa inaad xallisaa xujooyinka ka soo muuqan doona dhammaan xiisaha kala duwan, taas oo noqon doonta mid aad u adag oo ka dhan ah horumarka badan, waxay ku xirnaan doontaa inaad ku guuleysato inaad dhammayso.
Waxyaabaha wanaagsan ee halxiraalaha ah ayaa ah in mid kastaa uu leeyahay kakanaanta, talooyinka ayaa tagaya kaliya hal meel oo hadii ay khaldan tahay, waxay kaaga digeysaa inuusan meeshaas galeynin. Game Puzzle Game Puzzle Game wuxuu helayaa 4,6 xiddig qiimayn ah 5. Waxaa soo dejiyey in kabadan 1.000 qof maanta.
Developer: ciyaarta boqorka
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Ciyaaraha Harry Potter ee ugu wanaagsan Android
10ka barnaamij ee ugu sareeya ee samaynta khariidadaha fikradaha